Miala amin'ny pôrnôgrafia, manampy amin'ny fanarenana sy fisorohana | Reward Foundation
Home Miala amin'ny Porn
Lehilahy an'arivony eran'izao tontolo izao no nahazo tombontsoa tamin'ny fialana amin'ny pôrnôgrafia. Toy ny fihetsika tsy voafehy rehetra, ny henatra tsy mahay mifehy ny fihetsitsika manokana no matetika no sarotra indrindra. Fa mba fantaro, tsy tapaka ianao. Afaka miova ianao.
Ny Reward Foundation dia manolotra tsatokazo ho an'ny fitaovana hanampy anao hijanona.
Ny fialana vetaveta dia dia hafa ho an'ny rehetra. Samy hafa ny ati-doha rehetra, noho izany ny fizotran'ny fialana dia tena manokana. Ny sasany mahita fa sarotra izany, fa ny hafa kosa afaka manapa-kevitra ny hijanona tsy misy korontana farafaharatsiny.
Voalohany, mila manaiky ianao raha misy ny olana ankehitriny na mety hitranga.
Faharoa, mila mitady fomba hijanonana ianao. Midika izany fa manala ny pôrnôgrafia anao rehetra ary manapaka ny rohy manome azy.
Fahatelo, manampy amin'ny fitadiavana hetsika hafa hanamafisana ny sainao, ny vatanao ary ny fiainam-piarahamoninao hanoloana ny fotoana sy ny ezaka laninao amin'ny pôrnôgrafia.
Ao amin'ity fizarana ity, ny Reward Foundation dia manolotra fitaovana sy fomba fiasa sasantsasany hahafahanao, na olona iray karakarainao, hahitanao tanjaka sy finiavana hialana amin'ny fangejana ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet. Manarona ny dian'ny pôrnôgrafia miala tanteraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mirary soa amin'ny fananganana ho avy tsy misy pôrnôgrafia ary fampivelarana fiainam-pitiavana mahafa-po miaraka amin'ny tena mpiara-miasa fa tsy izany.